NOMERY 13.1-20	F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
NOMERY 13.1-20	F. 6
MILA FANOMANANA NY ASAN’ANDRIAMANITRA
Efa tany nomen’Andriamanitra anefa mila safona (2). Ny fisafoana dia midika famakafakana tsara ny zava-misy mialoha ny fanafihana. Iza tokoa moa no mpanjaka “raha handeha hiady amin’ny mpanjaka hafa, no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara, na mahay mandresy ilay mitondra roa alina amin’ny iray alina izy na tsia” (Lioka 14.31). Mila fantarina ary na vitsy na maro, na mahery na osa ny miaramila tafihana (18). Tsy maintsy miomana tsara Mosesy na dia efa fantany am-pinoana aza fa handresy ny Isiraely satria ny vavan’i Jehovah no efa niteny (Eksodosy 23.27). Andraikitry ny Isiraely rehetra ny ady. Tsy miady irery ho an’ny lovany avy akory ny fokon’Isiraely tsirairay fa miara-miady kosa ka izany no nangalan’i Mosesy solontenan’ny foko iray avy hisafotany (3-16). Tsy ao anatin’ireo ny
Levita (Deotoronomia 18.1-2) fa Efraima (8) sy Manase (11) , zanak’i Josefa (Genesisy 48.5) no mameno ny isa. Izao fiaraha-mientan’Isiraely izao dia endriky ny fiainan’ny fiangonana ho avy izay ahitana momban’ny tena maro mifampiankina (1Korintiana 12.12-26).
Misalasala ve Mosesy amin’ny hakanton’ny tany Kanana? Tsy efa nampanantena ve Jehovah fa hitondra ny Zanak’Isiraely ho any amin’ny tany tondra-dronono sy tantely (Ekspdosy 3.8) koa nahoana Mosesy no mbola mampanontany ihany na tsara na ratsy (19) izany tany izany (20). Ny tanjony dia ny hampiseho amin’ny mpisafotany sy ny vahoakan’Isiraely hoe “jereo” fa azo antoka tanteraka ny teny fikasan’Andriamanitra .
Ianao koa, omany tsara avokoa ny asan’Andriamanitra rehetra mba ho tontosa antsakany sy andavany.